ယေဘူယျတော့ပူပန် Disorder | USAHello | USAHello
ထွေအုပ်အထွေထွေတော့ပူပန် Disorder အဘို့အတို. သငျသညျထွေအုပ်ရှိပါက, သငျသညျအလွန်စိုးရိမ်ပူပန်ခံစားရတယ်. စိုးရိမျအာရုံကြော feeling ကလူအရေးပါသောအဖြစ်အပျက်မတိုင်မီရနေသည်. လူအများစုဟာတစ်ခါတစ်ရံဒီခံစားချက်ရှိ. သို့သော် အကယ်. သင်ဤနည်းလမ်းအချိန်အများစုကိုခံစားရလျှင်, သင်ပြုမဆိုအရေးကြီးသောအရာများကိုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်ပင်, သငျသညျထွေအုပ်ရှိစေခြင်းငှါ.
အထွေထွေတော့ပူပန် Disorder ၏လက္ခဏာများ